♪ Angel Shaper: March 2010
အသိတရားဆိုတာ...???တဲ့။ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်ချင်းဖလှယ်ဖို့ ချစ်ခင်ရတဲ့ အမသေးသေးလေး မအင်ကြင်းသန့် က ချစ်ညီမ သေးသေးလေးကို တက်ဂ်ထားပါတယ်။ Angel Shaper ဒီခေါင်းစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားသလို၊ ရေးဖို့လည်း တော်တော်လေး အားခဲထားပေမယ့် အသိဥာဏ်ဗဟုသုတအားနည်းချက်ကြောင့် တော်တော်နောက်ကျနေမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ချစ်ခင်မှုကို လေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက် အင်မတန် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အကို ကိုစေတနာကို ဂျီတိုက်ပြီး သူ့ဆီကနေ အသိတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သူ့အမြင်လေးတွေကို အများကြီး မှတ်သားနာယူရင်း မောင်နှမနှစ်ယောက် ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အသိတရားဆိုတာကို လူတွေက ဘယ်လိုခံယူထားတယ်၊ ဘယ်လိုတိုင်းတာထားတယ်ဆိုတာ Angel Shaper မသိပါဘူး။ ဒီလူဟာ အသိတရားရှိတယ်၊ မရှိဘူးဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လေ့လာ ဆည်းပူးခြင်း၊ အတွေ့အကြုံ၊ ဥာဏ်ပညာ ဗဟုသုတ၊ သူ့ရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်နဲ့ ခံယူချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ရပါ့မလား??? အဲလိုပဲ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အသိတရားတွေ တူညီမယ် လို့တော့ မျှော်လင့်လို့မရပါဘူး။ အသက်ငယ်ပေမယ့် အသိတရားပြည့်ဝလို့ ကြိတ်ပြီး လေးစားအားကျရတဲ့ သူတွေ ရှိသလို၊ အသက်ကြီးနေပေမယ့် အသိတရားမရှိပါလားလို့ ကိုယ့် ဦးနှောက်သေးသေးလေးနဲ့ ဆုံးဖြတ်မိ ခဲ့တာတွေလည်း မနည်းတော့ဘူးမလား???
အသိတရားနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ စကားလုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ... အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာဆိုရင်လည်း အသိနဲ့ ပတ်သက် သွားရတာပဲလေ။ နောက် အသိဆိုတာရှိရင်၊ မသိဆိုတာလဲ ရှိမှာပါပဲ။ တကယ်တော့ လောကကြီးက အင်မတန်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ဒီတော့ လောကကြီးမှာ သိစရာတွေကလည်း အများကြီးပါပဲ။ လူတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ၊ လူတွေရဲ့အရည်အချင်းတွေ စသဖြင့် လူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သိစရာတွေ တပုံတပင်ရှိပါတယ်။ သဘာဝနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သိစရာတွေ အများကြီးပါပဲ။ လောကသဘာဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ အတတ်ပညာတွေ၊ လူတွေတွေးခေါ်ထားတဲ့ အသိပညာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သိစရာတွေ အများကြီးပါ။ တရားဆိုတာကတော့ ရှင်းရှင်လေးပါ... မှန်ကန်မျှတခြင်း ပေါ့။ ဒီတော့ လူတစ်ယောက်ကို....... ဒီလူကတော့ လောကမှာ အရာခပ်သိမ်းသိရှိပြီး မှန်ကန်တယ်၊ မျှတတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လူကြီးသူမတွေ ဆုံးမခဲ့ကြတယ်။ "အသိတရားနဲ့ ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားကြ" တဲ့။ ဒီတော့ ဘာတွေကို သိရမှာလဲ???
နားလည်ရသလောက် ပြောရရင်တော့ အသိတရားဆိုတာ...ကိုယ့်နောင်ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ နောင်ဘဝအတွက် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးအပြင်၊ လက်ရှိ ဘဝမှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ဘဝ ရပ်တည် ရှင်သန်ရေး၊ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း၊ ဆုတ်ယုတ်ရာဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတွေ၊ ကိုယ့်ကြောင့် သူတဖက်သား ဒုက္ခရောက်မှာ၊ ကောင်းကျိုးဖြစ်မှာတွေကို သိရှိပြီးတော့ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကောင်းဖို့ကော၊ သူတစ်ပါး ကောင်းဖို့ကော နေထိုင်ကျင့်ကြံပြီး ကျင့်သုံးတတ်တာကို အသိတရား ရှိတယ်လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကောင်းကျိုး၊ သူတစ်ပါးကောင်းကျိုး နှစ်မျိုးမှာ ကိုယ့်ကောင်းကျိုးကြီးပဲ လွန်ကဲပြီး တစ်ဖက်သားအတွက်တော့ ဆိုးကျိုးဖြစ်အောင် ကျင့်သုံးတတ်တဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်အတွက်ရော သူတစ်ပါးအတွက်ပါ အကျိုးမဲ့စေတဲ့သူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသိမဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။
ဒီလိုပါပဲ... အသိတရားကို သိပြီးရင် အသိတရားတွေကို မမေ့မပျောက် ထာဝရကျင့်သုံးတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်နေ ပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ အသိတရားနားမှာ သတိတရားဆိုတာ ကပ်ပါနေပါတယ်။ ဥပမာ..... ဆေးလိပ်စွဲသောက် တတ်တဲ့ လူတွေဟာ သူဆေးလိပ်သောက်လိုက်တာ သူ့အတွက်၊ သူ့မိသားစုအတွက်၊ သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင် အတွက်ပါ မကောင်းမှန်း မသိတဲ့သူ မရှိပါဘူး။ အဲဒါကို သိသိကြီးနဲ့ ဆေးလိပ်ကို မဖြတ်ပဲ ဆက်သောက်နေတာ အသိတရားရှိတယ်လို့ ခေါ်လို့မရပါဘူး။ မကောင်းမှန်းလဲသိတယ်၊ ဖြတ်လဲ ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလူဟာ အသိတရားရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆေးလိပ် သောက်ချင်စိတ် ဖြစ်လာရင် မသောက်သင့်ဘူးလို့ အချက် ပေးတာ သတိပါပဲ၊ မသောက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ အသိရှိသွားပါပြီ။ ကိုစေတနာဆိုရင်တော့ သူအိပ်နေတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ အသိရှိပါတယ်။ အိပ်နေရင် ဘယ်တော့မှဆေးလိပ်မသောက်ပါဘူးတဲ့။ (သူကိုယ်တိုင် အဲလို ဝန်ခံထားတာမို့လို့ သူ့ကိုဥပမာပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဟဲ)
အထူးသဖြင့် အသိတရားဆိုတာ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိန်းတာပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြီး သူတစ်ပါးအပေါ် ကိုယ်မကြိုက်တာ၊ မကောင်းဖူး ထင်တာကိုမလုပ်ပဲ၊ ကိုယ်ကြိုက်တာ၊ကောင်းမယ်ထင်တာကိုပဲ လုပ်တာကို ကိုယ်ကျင့်တရားလို့ ခေါ်ပါမယ်။ လူတွေရဲ့စိတ်ဟာ မကောင်းမှုမှာ မွေ့ပျော်လွယ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့လည်း တော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့... ကိုယ့်အပေါ် သူတစ်ပါးမကျင့်သုံးစေချင်တဲ့ အရာအားလုံးကို ကိုယ်ကလည်း သူတစ်ပါးအပေါ် အလွယ်တကူ မကျင့်သုံးမိဖို့ သတိလေးနဲ့ အသိတရားလေးထားပြီး နေထိုင်ကြိုးစားသွားကြမယ်ဆိုရင် လောကကြီးဟာဒီ့ထက်ပိုပြီး ပျော်စရာ ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့....... Angel Shaper နဲ့တကွ ချစ်တဲ့မောင်နှမအားလုံး ကိုယ်ကျင့်တရားကော၊ သူတစ်ပါးကောင်းမွန်ရေးကော၊ မိမိဘဝတိုးတက်ရေးကော၊ ကောင်းအောင်နေတတ်တဲ့ အသိတရားရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါစို့၊ အသိတရားနဲ့ ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါစို့ လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
မပြည့်စုံတဲ့ Angel Shaper ရဲ့ အသိတရားဆိုတာ...??? လေးကို ချစ်မ မအင်ကြင်းနဲ့အတူ ..................
ချစ်တဲ့ မောင်နှမအားလုံးလဲ ကျေနပ်နိုင်ကြပါစေနော်။
Labels: ခင်မင်မှု အမှတ်တရလေးများ
ဒီငွေလောက်နဲ့ ပဲမနူး ဘူးဆိုတဲ့ မလေးရှား က အိန္ဒြာ ကွန်ယက်ကုမ္ပဏီ လီမီတက်
ကျွန်တော့ ကောင်လေးတယောက်ပေါ့.... မြန်မာပြည်မှာ အလှူလုပ်ဖို့ ၇.၃.၂၀၁၀ ရက်နေ့ က အိန္ဒြာဆိုတဲ့ ငွေလွဲ လုပ်ငန်းကနေ ငွေလွဲခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်.. ၁၀.၃.၂၀၁၀ လောက်ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့  ကိုရောက်နေကြပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ ၁၀ရက်နေ့ အထိမရောက်တော့ ကောင်လေးလဲ စိတ်ပူပြီး ( ၀၃-၂၀၇၀၁xxx... )ဆိုတဲ့ အိန္ဒြာရုံးချုပ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီးညနေပိုင်းမှာမေးရှာ ပါတယ်။
အိန္ဒြာရုံးချုပ်က ဖုန်းကိုင်တဲ့ကောင်မလေးကလဲ အခုပို့နေပါတယ်တဲ့လေ..
ဒီလိုနဲ့ စိတ်ချ လက်ချနေနေရင်း ၁၁.၃.၂၀၁၀ နေ့လယ်မှာ ရန်ကုန်က ဖုန်းဝင်လာပါတယ်..
အလှူငွေ မရောက်သေးပါဘူးတဲ့လေ... အဲတာနဲ့ သူလဲ ရုံးချုပ်ကို ဖုန်းဆက်ရှာပါတယ်..အရင် ဖုန်းကိုင်နေကြ ကောင်မလေးကဘဲ ကိုင်ပြီးတော့ပို့နေပါတယ်တဲ့..(သူ့ကြည့်ရတာ ဖုန်းလာတိုင်းဖြေဖို့ အလွတ်ကျက်ထားပုံရပါတယ်) ဒါနဲ့ဘဲ ကျွန်တော့ ကောင်လေးက အမရေ ၇.၃.၂၀၁၀ ရက်နေ့ ကငွေလွဲလိုက်တာပါ.. မနေ့က ၁၀.၃.၂၀၁၀ ရက်နေ့ ကလဲပို့နေပါတယ် ဒီနေ့၁၁.၃.၂၀၁၀ နေ့လယ်မှာ လဲပို့နေပါတယ်လို့ အမက ပြောပေမယ့် ငွေမရောက်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်... ဒီတော့မှ ဖုန်းကိုင်တဲ့ ကောင်မလေးက ဘောက်ချာနံပါတ် ပြောပါဆိုပြီးမေးပါတော့တယ်.လွဲတဲ့စာရင်းကြည်ပေးမယ်လို့.. ပြောနေတုန်းမှာဘဲ နောက်ထပ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် က ဖုန်းဝင်ကိုင်ပြီးမေးပါတယ်..
ဘယ်ဆိုင်ကလွဲတာလဲလို့ မေးပြန်ပါတယ်.. ဒါနဲ့ဘဲ ကောင်လေးက ကလန်းဆိုင်က လွဲတာပါလဲဆိုရော... ကလန်းဆိုင်ကိုဖုန်းဆက်ပါတဲ့..(၀၃-၃၃၄၂၂xxx...)ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးပါတယ်...
ယုံကြည်.စိတ်ချ.တိကျ.မြန်ဆန် ( ပဲစားရန် :P ) ကောင်လေးက ကလန်းဆိုင်ခွဲကိုဆက်ပြီး အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီးငွေမရောက်သေးကြောင်းပြောပြပါတယ်..
အဲ့ဒါနဲ့ ဆိုင်ကလူကလဲ ရန်ကုန်ကိုမေးပေးမယ်ဆိုပြီး ဖုန်းချသွားပါတယ်... နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ကောင်လေးက ဖုန်းဆက်ပြီးပြန်မေးတော့ ရန်ကုန်ကလူ On Line ပေါ်မှာ မရှိလို့ ခဏစောင့်ပါလို့ ပြောတာနဲ့..
ကောင်လေးက ဖုန်းနံပါတ်ကို တောင်းလိုက်ပါတယ်... ( ၅၄၁xxx... )ကို ခေါ်တာပေါ့... ၁၅ မိနစ်လောက်ခေါ်တာ လိုင်းမအားလို့ နောက်ထပ် ဖုန်းနံပါတ် ရှိရင်ပေးပါဆိုတော့ နောက်ဖုန်းနံပါတ် ( ၇၂၂xxx.. ) ဆိုတော့ ကောင်းလေး လဲ လက်မလယ်အောင်ဘဲ ဖုန်းနံပါတ် ၂ခုလုံးကို ဆက်ရှာပါတယ်.. မိနစ်၂၀ လောက်ကြာတော့ ကံကောင်း ထောက်မစွာနဲ့ ( ၅၄၁xxx... )ကို ဝင်သွားပါတယ်.. ဒါနဲ့ဘဲ ရန်ကုန် ငွေလွဲကို အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီးငွေမရောက်သေးကြောင်းပြောပြပါတယ်.. လွဲသူအမည်... ပို့သူအမည်... ဘောက်ချာ နံပါတ်..ငွေလွဲနေ့စွဲ တွေ ပေးပြီး ရှာလဲ ရှာခိုင်းရော.. သူ က ဒီစာရင်းမရှိပါဘူးတဲ့လေ... ( ကျွန်တော်လိမ်မိအပြစ် ရှိပါ၏ လို ပြောရမလိုပါဘဲ ) အဲ့ဒါနဲ့ ကောင်လေးက ကလန်းဆိုင်ခွဲကိုဆက်ပြီးစာရင်းမရှိပါဘူး လို့ပြန်ပြောပြပါတယ်...
ဇာတ်လမ်းက အဲ့ဒီ မှာ စတော့တာပါဘဲ.. ပရိတ်သတ်ကြီးရေ....
ကလန်းဆိုင်ခွဲကဖုန်းကိုင်တဲ့သူက..ဒါဆိုရင် ဒီကလူတွေက ဒီငွေကို ဘုံးလိုက်တယ်ပေါ့ ( အဲ့ဒီလိုလဲ မပြောမိပါလားကွယ် ) ဒီငွေလောက်နဲ့ ပဲမနူးဘူးဆိုဘဲ... ( စဉ်းစားမိတာက သူ့ ခမျာ နေ့တိုင်း ပဲစားနေလို့ ပဲစကား ပြောတယ်ထင်ပ ..ဂျောက်ဂျက်သီချင်း ကို...."နင် ထမ္မင်းစားပြီးကြီးတာလား? ပဲ စားပြီးကြီးတာလား" လို့ ပြောင်းဆိုရမလိုဖြစ်နေပြီ..ဟဟ ) ကောင်လေးကတော့ နှာကစ်သွားတာပေါ့.. သူကစားသုံးသူကို....အမှန် က စာရင်းကြည့်မှားတဲ့ ရန်ကုန် ငွေလွဲကို အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးရ မှာဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ 
စားသုံးသူကို. ပြန်ရန်တွေ့တာတော့ အရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်.. ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဥပဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ "စားသုံးသူသည် အမြဲမှန်သည်" ဆိုတဲ့ဥပဒေသကတော့ မြန်မာစားသုံးသူတော့ အလှမ်းဝေးလျှက်ဘဲ ရှိနေတယ် ဆိုတာတွေရပါတယ်... ဒီလိုနဲ့ ဘဲ ရန်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်.. သူ ရန်ကုန် ငွေလွဲကို ဆက်သွယ်ပေးမယ့်အကြောင်း .. ခုဖုန်းဆက်နေတာ ၇ ကြိမ်ရှိနေပြီဖြစ်လို့ သူတို့အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ထပ်မဆက်ဖို့.. သူတို့က ဘဲပြန်ဆက်သွယ်ပါမယ် ဆိုပြီးပြောပါတယ်..... ( သြော်ဘယ်သူ ကငွေအ ကုန်ခံပြီးသူတို့ဆီဖုန်းဆက်ခြင်ပါ့မလဲ..
ကိုယ့်ကောင်မလေးလဲမဟုတ်... ကိုယ့်ငွေမရောက်လို့ဆက်တာကို..ဟဟ )
ဒီလိုနဲ့ဘဲ နောက် ၄၅ မိနစ်ကြာတော့ ဖုန်းပြန်လာပါတယ်..ရန်ကုန် ငွေလွဲကစာရင်း အကြည့်မှားသွားတာပါတဲ့...
အခုပို့နေပါတယ်တဲ့လေ..( ဓါတ်ပြားဟောင်းကြီးပြန်ဖွင့်ပြီး တစ်ခွန်းမှ သူတို့ မှားကြောင်းပြန်မပြောသွားပါဘူး.. )..
ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာက ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာ နိူင်ငံတကာအဆင့်မှီ တရားဝင်ငွေကြေးလဲလှယ်တဲ့ စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြင့် နိူင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်သားပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး အကျိုးရှိကြမှာဘဲလို့ မြင်ယောင်မျှော်လင့်ရင်း ( မျိုးကြီးဆိုတဲ့ သီချင်းထဲက "မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်တဲ့ လူတွေနှလုံးသားခြင်းလက်ကမ်း" ဆိုသ လို ) ကျွန်တော့ရဲ့  မျှော်လင့်ချက်တွေကိုလဲ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးဆီ ကို ပြန်လည် လက်ဆင့်ကမ်း လိုက်ရပါတယ်...။ ။
မှတ်ချက်။ ။ ခုစာရေးနေစဉ်မှာဘဲ ရန်ကုန်မြို့ ကို အလှူငွေတွေရောက်ရှိသွားပါကြောင်း... :)